သက်တန့်ချို: အံ့သြဖွယ်ရာအသက် ၂၅၆ နှစ်နေခဲ့သော Li Ching-yun
Posted by သက်တန့်ချို at 12:54 PM
ပြည့် February 21, 2012 at 1:39 PM
လိပ်လိုနေထိုင်ဆိုတာက အန္တရာယ်တွေကို အမြဲကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အခွံ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှု ရှိရမယ်၊ ရန်သူ ဒေါသ၊ မောဟတွေ တွေ့တဲ့အခါ စိတ်ဆိုတဲ့ အခွံထဲကို ခေါင်း၊ ခြေ၊ လက်တွေဆိုတဲ့ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေကို ရန်သူတွေ မတွေ့အောင် ဖွက်ထား၊ ရန်သူ ဒေါသတွေ ပြေတဲ့အခါ အရည်အချင်းတွေထုတ် ဆက်လျှောက်၊
ခွေးတစ်ကောင်လို အိပ်ဆိုတာကတော့ နိုးနိုးကြားကြား သတိရှိရှိ နေထိုင်၊
ပင်ကွင်းလို ဘယ်လို လမ်းလျှောက်ရမလဲ ပင်ကွင်းလျှောက်ပုံ မသိဘူး............ :)
(အစ်ကိုသက်တန့် အဲဒီ အချက်သုံးချက်က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဟင်)
သက်တန့်ချို February 21, 2012 at 3:58 PM
ပင်ကွင်းလို အရပ်ရှစ်မျက်နှာကိုစူးစမ်း---ပင်ကွင်းတွေက ရှေ့တည့်တည့်မကြည့်ပဲ ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်တတ်ကြတယ် လမ်းလျှောက်ရင် ငူငူကြီးငိုင်ငိုင်ကြီးမလျှောက်ဘူး နိုးနိုးကြားကြား စူးစမ်း-- အဲဒါကို ဆိုလိုတာထင်ပါတယ်း))
မယုံပါ... ပုံသဏ္ဍန်မျိုးစုံ တွေးကြည့်နိုင်တယ်
အလင်းသစ် February 21, 2012 at 6:58 PM
အဲလောက် အသက်အရှည်ကြီး နေရတော့လည်း ပျင်းစရာကြီးနေမှာပါအကိုရာ.. :D
အဲ့လောက် အသက်အရှည်ကြီး နေတာ
သူ အသက် ၅၀ လောက်က ဟာကို
မှတ်မိလား မသိဘူး .. :D
ကိုယ်တွေတောင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကအရာတွေ
သိပ်မမှတ်မိတော့ .. :D
Just one thing to point out! In Wikipedia, it said "Walk sprightly likeapigeon." That is not walking likeapenguin. Because of this interpretation error, the whole thought about his motto will completely change.
pyae June 9, 2012 at 2:23 PM